UHF EM4222 Inlay, EM4223 အင်းလေး, လှိုင်းနှုန်းသည် UHF သာဖတ်ရန်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး Tag ကိုအင်းလေး, EM4222 Chip Inlay, EM4223 Chip Inlay
အပူပိုင်းအင်းလေး EM4223 အင်းလေး, UHF EM4222 Inlay, လှိုင်းနှုန်းသည် UHF သာဖတ်ရန်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး Tag ကိုအင်းလေး
EM4222 chip ကို features တွေ
64-bit နဲ့ထူးခြားတဲ့ ID နံပါတ်ရေးသားဖို့ထုတ်လုပ်သူ
frequency လွတ်လပ်သော: အဆိုပါ 869MHz / 902-928MHz / 2,45 GHz အမြန်နှုန်းများတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်
chip အဆိုပါလှိုနှင့် Rectifier ရှိပါတယ်
အနိမ့်ဗို့အားစစ်ဆင်ရေး: 1.0V သကဲ့သို့အနိမ့်
အလုပ်လုပ်အပူချိန်: -40ကို C ~ + 85 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဒီဂရီ (-40° F ကို ~ + 185(F ကို°)
EM4223 chip ကိုဝိသေသလက္ခဏာများ
ISO ကို 18000-6A နှင့်အတူ interface သဟဇာတ
ပံ့ပိုးမှု auto-ID ကိုအလယ်ဗဟို Ean သတ်မှတ်, UCC နှင့် EPC ဒေတာဖွဲ့စည်းပုံမှာ
အဆိုပါအမြန်ရေတွက် Supertag mode ကိုထောကျပံ့
ISO ကိုမိသားစု Identifier ၏လျှောက်လွှာအရ (afi) အုပ်စုတစ်စု
အလျင်အမြန် user data ကိုဆုံးဖြတ်ရန် (ကြိုတင်မဲအတွက်စာရင်းဖတ်ရှုဖို့မလိုအပ်ပါဘူး)
frequency လွတ်လပ်သော: 862 ~ 870MHz / 902 ~ 950MHz / 2,45 GHz အမြန်နှုန်းအတှကျအသုံးပွုနိုငျသညျ
The EM4222 isasimple, read-only chip designed for low-cost tags. It carriesa64-bit serial number that is programmed at the factory. The chip can operate at 869 MHz, 915 MHz or 2.45 GHz အမြန်နှုန်း. အထိ 120 tags can be read each second, and the tags havearead range of2သို့ 20 မီတာ (6 သို့ 60 feet).
I am interested in your product EM4222 Inlay, EM4223 အင်းလေး, လှိုင်းနှုန်းသည် UHF သာဖတ်ရန်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး Tag ကိုအင်းလေး
prev: TI Tag ကို 2K အင်းလေး, Ti2K အင်းလေး, TI 2048 အင်းလေး, Tag ကို-က HF-ငါအင်းလေး
နောက်တစ်ခု: EM4423 အင်းလေး, NFC ကို + လှိုင်းနှုန်းသည် UHF Dual-ကြိမ်နှုန်း Tag ကို
HF / လှိုင်းနှုန်းသည် UHF အပူပိုင်းအင်းလေး, Clear ကိုအပူပိုင်းအင်းလေး